မောင် Census | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » မောင် Census	46
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 20, 2015 in Critic, History | 46 comments
အစကတော့ ရွာထဲ က လူတွေထဲ ခြေလှမ်းဦး မဲကျ တဲ့ လူတွေ ကို ဘဲ စစ်တမ်း လုပ်ဖို့ပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အားလုံးပါပြီး စည်ကားသွား အောင် မောင်အံ ရဲ့ စာရင်း နဲ့ ဇီကလေးရဲ့ စာရင်း ကို ညှိပြီး ရွာသန်းခေါင်စာရင်း လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ စာရင်းထဲ မှာ ရွာသက်တမ်း ကို ရက် နဲ့ တွက်ပြီး အစဉ် အတိုင်း လုပ်ထားပါတယ်။
ရွာသက်တမ်း ကို ပို့စ် စတင်တဲ့ နေ့ နဲ့ သူနောက်ဆုံး ပို့စ် တင်ခဲ့ တဲ့ Active ရက် ကို ခြားနားပြီး တွက်ထားတာပါ။ (Last Date – 18/08/15)
ရွာသက်တမ်း ကို ရွာထဲ မှာ ဆက်ပြီး Active ဖြစ်တဲ့ ရက်လို့ ဘဲ ဆိုကြပါစို့။
“အစ်မအေး” က သူကြီး ထက် ရဲ့ ရှေ့မှာ ဖြစ်နေပြီး ရွာသက်အရှည်ဆုံး အဖြစ် တွေ့လိုက်ရတယ်။
၂၀၀၇ ထဲ က ရွာထဲ ဝင်နေသူမို့ ရွာ ရဲ့ Founder ထဲ က တစ်ယောက် တောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ :-))
အခုလဲ ရွာကို သံယောဇဉ်ကြီး ဆဲ ကို။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိ ဆုံးမစကား လေးတွေ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ။
(ဆာဗာ ပြသနာကြောင့် ရက် မှား နေတယ်လို့ သိရလို့ ပြင်ထားပါတယ်။ အမှားပြင်ပြီး ရက် ကိုပါ ပြောပြ လို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မအေး) :-))
မှတ်ချက်သာပေးပြီး ပို့စ်မတင်သူ တွေ အတွက် Record ကို Trace လိုက်ချင်ပေမဲ့ အဲဒီလောက်ထိ အချိန်မပေးခဲ့ နိုင်လို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ဥပမာ – နှင်းနှင်း (ဝီလီလေး Mum )၊ ခရစ်စ် နဲ့ ကိုရင်မောင် တို့ဆို ပို့စ်မတင်ဘဲ မှတ်ချက် တွေချည်းပေးနေသူ တွေပါ။
ပို့စ်တင်တာ အများဆုံး နဲ့လဲ ပြချင်ပေမဲ့ ပို့စ်အနဲအများ က တကယ်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။
နဲနဲလေး တင်ထားကြပေမဲ့ တကဲ့ အနှစ် တွေ ရေးနိုင်သူတွေလဲ အများကြီးပါ။
ဥပမာ – ပုခ်ျ (သူတင်ထားတာ ၂၇ပုဒ် ထဲ ပေမဲ့ အပုဒ် တိုင်း ဟာ အနှစ်သာရရှိ တဲ့ စာ တွေချည်းပါဘဲ)
အဲဒီ သန်းခေါင်စာရင်းလေးက သိပ်ပြီး တိကျမှု တော့ မရှိပါဘူး။
ပိုအရေးကြီး တာကတော့ အောက်မှာ ပြထား တဲ့ ကားချပ် ကို ကြည့်ပါ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လေး တွေ့နိုင်တဲ့ အချက်ပါဘဲ။
အဲဒီ ကနေ သူကြီး ကို ထင်ထင်ရှားရှား ထောက်ပြချင်တဲ့ အချက် တစ်ချက် ကိုတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြနိုင်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ သူက တော့ သိပ်အလေးထားမယ် မထင်ပါ။
သို့ပေမဲ့ ရွာကိုချစ်သော ရွာသူ တစ်ယောက် အနေ နဲ့ တော့ သတိပေးစရာ ရှိတာပေးခဲ့ပါရစေ။
ဒါမှ နောင်များမှာ စည်ကားသော၊ အောင်မြင်သော ရွာ အနေ နဲ့ ပွဲတက်ခွင့် ရမှာမို့ပါ။
So… That’s it. :-)))
maung moe nyo
kai says: Aye KK ကမှားနေတာထင်တာပဲ..
2/ မောင် ရေချမ်း Thu Sep 17th, 2009 @ precisely 7:33 pm
3/ Voice Fri Sep 18th, 2009@ precisely 4:22 pmSat Oct 3rd, 2009
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. နောက်နှစ်မတိုင်ခင်တော့… ရွာကို ဂီယာတဆင့်မြှင့်ပါမယ်… လို့..။
Alinsett @ Maung Thura says: Back ဂီယာမထိုးမိပါဘူးလို့ ကတိပေးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အန်ထရီ ဘိုင် ရီးရားး ထင်ပါ့။
ပြေါရရင်လည်း သစ်စာဖောက်တွေ အကြောင်း ပါလာတော့မယ်။
Ma Ma says: ပိုစ့်အရေအတွက်နည်းပေမယ့် အရမ်းကောင်းသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ မစုဥာဏ်နဲ့ မှီ ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးတွေထဲပါတယ်။
ပိုစ့်များပြီး ကြိုက်တာတွေထဲက ပြောရရင်တော့ မလတ်နဲ့ ခိုင်ဇာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .တော်တော်ကြိုးစားထားတာပဲ…ကောင်းပါလေ့
.၂၀၁၁ ကလူဝင်အများဆုံး..ရွာထဲလည်းအစီဆုံးပါပဲ…ကျုပ်တောင်ရွာထဲဝင်ဖတ်နေတာ ၂၀၁၀ထဲကပါ
.ကွန်ပြူတာတတ်ခါစ…အင်တာနက်ဆိုတာလည်းသုံးတတ်ခါစပေါ့..ဒါကြောင့် .ကွန်မန့်လည်းမပေးတတ်…စာရေးဖို့တော့ဝေလာဝေးပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
ကြာခဲ့ပါပြီ၊2007ခုနှစ်ထဲကပါ commet တွေတော့လိုက်ဘူးပါသည်။
commetတွေကိုAye.kkနဲ့ ပဲဝင်ရောက်ရေးသားဘူးပါတယ်။ postမတင်ခင်ထဲက
ဂဇတ်မှာအရင်လေ့လာဖတ်ရှုပြီးမှ ၊နှစ်သက်မှုအရ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ရေးသားခွင့်ရှိတာသိရှိခဲ့ရလို့
မြစပဲရိုး says: အမှားပြင်ပြီး ပါပြီ။
အမှားပြင်ပြီး ရက် ကိုပါ ပြောပြ လို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မအေး။ :-)))
အစ်မ နံပါတ် ၃၅ မှာပါ။
ဂရပ်ဖ်ပုံ ကို လဲ 2008က စပြီး ပြင်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ 2011 နဲ့ 2012 မှာ ရွာထဲ လူ ဝင်များခဲ့တာပါ။
အဲလိုမျိုး ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားကြဖို့ လိုပြီ။
Yes .. We can (or) No .. We can’t
ဇီဇီခင်ဇော် says: M A Y B E
kai says: Yes We Can!
မြစပဲရိုး says: ကွကိုယ်ပြောချင်တာ ပြော လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့
ဖခင်အုပ်စိုး သော တိုင်းပြည် မှာလေ
ကလေးတွေ ငို တိုင်း ဗိုက်ဆာလို့ လို့ ပုံသေမှတ်ပြီး ပါးစပ်ထဲ နို့ဗူး ဘဲ ဇွတ်ထည့်တော့တာဘဲ။
ကလေးတွေ ငိုတာ က သေးစိုလို့လား၊ ပွက်စိတ်ကိုက်သလား၊ အချီခံချင်လို့လား မတွေး။
မနေနိုင်တဲ့ နာနီ တွေ မှာ အမုန်းခံ ပြောလဲ ခဏဘဲ။
အခုလဲ ကြည့် ..
ပုံ မှာ နာနီ တွေ ကို အငှားထားပြီး Yes .. We Can! လုပ်ခိုင်းသလား။
လောလောဆယ်တော့ နာနီ တွေ ထဲ ခွင့်ယူ ကို ယူရမဲ့ သူ တွေ ရှိနေတော့
နာနီ အစ်မအေး၊ နာနီခင်ဇော် နဲ့ နာနီမမ တို့ရေ ပုံ ကို ကြည့်ထားပေရော့။
မိခင် အုပ်စိုးမဲ့ NLD ကိုသာ မဲ ပေးကြပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယုံမလားးတော့ မသိဘူးး အရီးးရေ
Yes we can ကိုတောင် မိန်းးမ ပုံကြီးးနဲ့
ပြောမို့ ဟာ ခွဲခြားးတယ် ဖြစ်ပါမယ်လေ ဆိုပြီးး ပြန်ဖျက်လိုက်တာာာ
surmi says: ၉၄ ပုဒ်တောင်မှရေးခဲ့ပါပြီကော
အတော်အသင့် ရွာသက်ရင့်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်နေပါလေရော .……
ရွာကိုစဝင်တာကတော့6လပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။
အခုလိုပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အနော် စာရေး တော်တော်ပျင်းပါသီ..
-စာဖတ်မပျင်းအောင် ကြိုးစားနေပါသီ :P
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုပေါက် (မန္တလေး)	28/01/09
ကိုလတ်ကြီးရေ အဲ့ရွက်စွဲက မှားနေပါတယ်
ကျနော်ရွာကိုစရောက်တဲ့ရက်က 19-4-2010 ခုနှစ်ပါ
အခုလိုကြိုးစားပမ်းစား ထုတ်ပြတာ ကိုက ကျေးဇူးတင်ဘို့ကောင်းပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: ကပေါက်ကြီး ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်နော်။ ကျေးဇူးပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူကြီး နဲ့ ကြေးမုံ က အမျိုး မို့ (ဒီစာရင်း အရ) တစ်စိမ်းထဲ မှာ ကပေါက်ကြီး က ရွာ့သက်တော်ရှည်အမတ်ကြီး ပါ။ :-))
မြစပဲရိုး says: အားလုံးကျေးဇူးပါ။
တစ်ယောက်ချင်း မရီပလိုင်းနိုင်တော့တာ ခွေးလွှတ်ကြပါတော့။
စာရင်း ထဲ မှားတာ တွေ့လဲ ပြင်ပေးကြပါ။ :-))
မစုဥာဏ် says: တော်တော် အချိန်ပေး ပြီး လုပ်ထားတာမို့ ရွာလေးပေါ်ထားတဲ့ အရီးလတ် ရဲ့ စေတနာနဲ့ သံယောဇဉ်ကိုလဲ မှတ်တမ်းတင်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
မရေးဖြစ် ကွန်မန့် တွေ မပေးဖြစ်ပေမယ့်…အားလုံးကို သတိတရ ရှိပါကြောင်းနဲ့ 
ရွာထဲရောက်တဲ့ ရက်နဲ့ စာရင် စာရေးနိုင်တဲ့ အပုဒ်ရေက သိပ်နည်းနေသေးလို့အသစ် အသစ်တွေ ထပ်မံရေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမည့် အကြောင်း .. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီလာရောက် အသိပေးပါသည်။း)
အောင် မိုးသူ says: ဒီအထဲမှာ ရွာထဲကို မ၀င်ဖြစ်တော့တဲ့သူတွေလည်း တွေ့ရပါလား။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနှစ်ပိုင်းမှ နေ့တိုင်း ဝင်ဖြစ်လာတာရယ်ပါ။ သံယောဇဉ်မပြတ်ဘူးပေါ့။
black chaw says: 2011 နဲ့ 2012 မှာ ရွာထဲ လူ ဝင်များခဲ့တာပါ။
အမှန်တော့ ဟိုတုန်းက ကိုသစ်မင်း လုပ်ခဲ့သလို
အခု ကိစ္စ ကို ဆီမီနာလို့ ခေါ်မလား…၊
၀ပ်ရှော့ လို့ ခေါ်မလား ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ပြီး
ရွာက ရွာသူရွာသား တစ်ယောက်ချင်းစီကို
ရွာက လွမ်းနေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း ဘယ်လောက် ချစ်ခင် ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
ပြောဖို့ ဆိုဖို့ ကွင်းလေးတွေ ဖွင့်ပေးနေမိတာပါပဲ…။
ဖေ့စ်ဘုတ် က တစ်ချိန်ချိန် မှာ ငြီးငွေ့လာကြမှာပါပဲ…။
အခု ကျွန်တော်တောင် ငြီးငွေ့စ ပြုနေပါပြီ…။
အခု ကျွန်တော် ရွာမှာ စာပြန်ရေးနေပါတယ်…။
ဟိုတုန်းကလို ကွန်းမန့်တွေ အများကြီး ရဖို့လည်း မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး။
ကွန်းမန့် ၀င်ပေးသူ တစ်ယောက်ရှိရင်
အဲဒီတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော့် ရဲ့ အထူးအရေးကြီးတဲ့ ဧည့်သည်တော်ပါပဲ…။
ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိနေပေမယ့် နောက်မှ ဆက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာ…။
ဦးကြောင်ကြီး says: မာမွတ်ခိုမ်ကဒေါ့ ဝံဖက်သူ တလ သိန်းချီဆိုဘဲ.. ဖွတ်ပါတီလို အဖွဲ့ဝံစာရင်းလို ဖြစ်နေမှား..
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီပိုစ့်ကိုလည်း Save ထားလိုက်ပြီ…
တောတွင်းပျော် says: အခုမှပဲ ပြန်မှတ်မိတော့ တယ် အရီး။
ကျနော့် ပထမဆုံး ပိုစ် ( သားသားဖိနပ်ချွတ်ထားတယ်) ကို ၂၀၁၁ နောက်ဆုံးရက် နောက်ဆုံးနာရီလေးမှာ နှစ်မကူးခင် ကသုတ်ကရက်တင်လိုက်တာ။
အဲ့ တုန်းကတင်သာ တင်သာ
တကယ့် ကို မဝံ့ မရဲ။ ချက်ချင်း ကော်မန့် တွေ ဝင်လာတော့ပျော်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း ငါကွလို့ တောင်ဖြစ်မိသေးတယ်။ member ဝင်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ အရဲစွန့် တင်လိုက်တာ။ လူသစ်ဆိုတော့့ ရင်ထဲက တထိတ်ထိတ်နဲ့ 
CharTooLan says: စာရင်းပြုစုပေးသူအရီးလတ်ကိုကျေးကျေးပါ :D
မြစပဲရိုး says: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-34082393
Really … 1 in7စာရင်းပြ ကိန်းဂဏန်း များ နဲ့ ပျော်ရွှင်နေသူ က သူကြီးမင်း တစ်ယောက်ထဲလား မှတ်တာ။
တို့များ သူကြီး အတွက် အဖော်ရပါပေါ့။
သူ့ကြည့်ရတာလဲ လူတစ်ယောက် ထဲကနေ Account တွေ အများကြီး ပွါးပြီ အားပေးနေနိုင်တာ ကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး ပီတိဖြစ် နေပုံဘဲ။
kai says: အဲဒီသူတို့.. ဖေ့စ်ဘုတ်ရုံးချုပ်လိပ်စာက.. 1 Hacker Way တဲ့..
ဆိုင်းဘုတ်ကို နောက်ဖက်ကသွားကြည့်တော့.. Sun ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်အဟောင်းကြီးဗျ..။
ငွေမရှိလို့.. ပေခေါက်ပြီး.. အဟောင်းကို လှည့်သုံးတာတော့မဖြစ်နိုင်..။
မြစပဲရိုး says: Thanks … I didn’t know it before.
Interesting message something about motivation (the other way round). :-))
You can also see an aging Sun Microsystems sign in that article.
by Molly Brown on December 8, 2014 at 4:59 pm
မြစပဲရိုး says: Oracle က Sun Microsystems ကို 2009 မှာ ဝယ်ခဲ့တာပါ။
Sun Microsystems ရဲ့ Product “Java” က တော့ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ရှိနေဆဲ မို့
တနည်း အားဖြင့် Java ရှိ နေသ၍ Sun Microsystems နာမည်က တွဲ ကျန်နေဦး မှာပါလေ။
သူတို့ ရဲ့ Main Product Server (Hardware) တွေမှာ Fail ဖြစ်ခဲ့တာ ပြောတာဘဲ။
@QUIL@ says: တလောကလုံး စမတ်ဖုန်းပွတ်တဲ့ခေတ်မှာ J2ME တေ၀ါးတာ မသိချင်ထောင်ထောင်နေသလားဟင်င်င်င်???
kai says: ခုမှသိတယ်.. ကျေးကျေး…
ဟုတ်ပါ့.. ဆန်ဖရန်ကို.. အယ်လ်အေကတက်ရင်.. ဖရီးမောင့်ဖက်အရင်ဝင်သမို့.. အဲဒီကနေ.. ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုသွားရင်.. တံတားတခုဖြတ်ရတယ်ဗျ..။
အဲဒီတံတားထိပ်မှာ.. ဖေ့ဘုတ်ရုံးနဲ့..ဆိုင်းဘုတ်ရှိပြီး.. အမြဲလိုလို.. ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့.. တိုးရစ်တွေတွေ့ရတယ်..။
အဲဒါနဲ့.. ကားဝင်ရပ်ပြီး.. စပ်စုကြည့်ပြီးတွေခဲ့တာ..။
အဲဒီကနေ.. ဆန်ဖရန်ဖက်ဆက်တက်ရင်.. ဖေ့ဘုတ်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့.. ဖရီးဝေးဘေးမှာ. အိုရကယ်ဆိုင်းဘုတ်နဲ့.. ပင်လယ်မေးတင်ထားတဲ့..ဧရာမတိုက်ကြီးတွေရှိသဗျ..
SUN = Stanford University Network ကတော့.. အင်တာနက်ရဲ့မိခင်ကျောင်းကြီးတခုနာမယ်ကြီးနဲ့မို့… java ထက်… လွှမ်းပါတယ်..။
ပြောသာပြောတာ…ကျုပ်ညီတော်မောင်ကတော့.. အဲဒီ SUN ပစ္စည်းတွေနဲ့..အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းတုံး…။
မြစပဲရိုး says: Mark Zuckerberg
တကယ်တော့ သူကြီးမင်း ရေ
မြန်မာပြည် ထွက် Social Website တွေ ထဲ မှာ ဒီလို Gazette လိုမျိုး နောက် တစ်ခု မရှိဖူး လို့ ထင်ပါတယ်။
So… you also can be proud of it if you want to. :-)))
kai says: မြန်မာပြည်ရဲ့. ပုဂံဆိုက်ဘာတက်စလုပ်တဲ့အချိန်လောက်မှာ.. ကျုပ်က.. yadanar.com နဲ့ဖိုရမ်ကို မြန်မာစာနဲ့လုပ်ထားခဲ့ဖူးသဗျ..။ အမှတ်မမှားရင်.. မြန်မာတွေထဲ.. အစောဆုံးပဲ..။
အဲဒီနောက်မှာ.. ကျုပ်သုံးတဲ့.. မြန်မာစာကို.. ပုဂံရော.. ပလဲနက်ကပါ.. သူတို့ဖိုရမ်လုပ်ပြီး.. ယူသုံးပါတယ်..။
အဲဒီခေတ်ကတည်းက.. Microsoft က.. မြန်မာစာကို.. မြန်မာလို.. ဖေါင့်မသွင်းပဲမြင်ရအောင်လုပ်ထားခဲ့တဲ့နည်းပါ…။
Embed fonts (WEFT) https://www.microsoft.com/typography/web/embedding/weft/
တချိန်ချိန်တော့.. အဲဒီသမိုင်းပြန်လှန်မယ်လေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: comment နဲ့ ယူရင် ပို တိကျနိုင်တယ် အရီးရေ့
သဂျီးကို ထပ် အပူကပ်ကြည့်တာ ကောင်းမလား
မြစပဲရိုး says: ရွာထဲ မှာ comment တောင် မှ တစ်ခါတစ်ခါ အရေးပေါ်ရင် Account ပွါးပြောတတ်တာ သိသား နဲ့ ဖိုးသိကြား လေး ရဲ့။ :-)))
လုံမလေးမွန်မွန် says: အနော်လည်း မအက်တစ် တစ်လှည့် အက်တစ် တစ်လှည့် ဆိုတော့ အခု ဖဘသုံးတာလေးလျှော့ပြီး ရွာပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်ချင့်…
Ma Ei says: ရွာကအိမ်ကလေးမှာ အလှဆင်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့
စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတာ မလတ်ရယ်……………….
ဦးကြောင်ကြီး says: သဂျီးကစလို့ ပူတူတူလေးအထိ နီတို့အားလုံး မြွေတွတ်…
မြစပဲရိုး says: ဒါကြောင့် နီ လဲ မောင်ကြွပ် ဖြစ်နေတာ။
ဇေယျာစံ says: ဖိုရမ် လောက ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက်တတည်း က ၀င်ခဲ့တာ ဗျ။
တချို့ ဖိုရမ်တွေ က အသက်မရှည်ကြဘူး ဗျာ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ် ကို ပြန်ပြီး အသက်သွင်းသင့်တယ် လို့ ထင်တယ် ဗျ။
nicolus agral says: 104 out of 208
I think I posted some posts till previous month
မမချွိ says: ပို့(စ) တင်တဲ့ နှစ်လေးကို ကြည့်လေ။
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 20, 2015
အဲဒီ ရက်ကနေ ဒီနေ့အထိ တင်တဲ့ ပို့(စ) တွေ ပါမှာ မဟုတ်ဘူးး
Foolish Girl says: နဲနဲလေးတော့လွဲနေသလားလို့ post ကစုစုပေါင်း ၃၉ ခုရှိပြီ ဒီထဲမှာ ၂၀ ခုပဲတဲ့
Foolish Girl says: အာာာာ
ဟီး ကျေးကျေးပါ Posted by ကို မမြင်ဘူး ဟီး
kotun winlatt says: အဲဗျာ . . . ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်ရက်က ဂဇက်မင်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုမှပဲ သိရတော့တယ် . . . နံပါတ် ၄၁ ဆိုတော့ တော်တော် စီနီယာကျတာပဲ . . . ငါကွ . . . ဟေ ဟေးးးး
sorrow says: ..13/05/12 ..ဆိုပေမယ့် ..ကျော်က.တကယ်က ၂၀၁၀ လောက်ကတဲက ၀င်ဖတ်ဖြစ်နေတာထင်ပါရဲ့… အဲ့တုန်းကမန်ဘာဝင်ဖို့..ကော်မန့်ဝင်ရေးဖို့ကိုတောင် တွန့်ဆုတ်မိအောင် ….ရွာကအရှိန်အ၀ါကြီးခဲ့တယ်… တချို့ကော်မန့်တွေက ပို့စ့်ထက်ကို မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အပြင် …ရွာသူ ။သားတွေအနေနဲ့​အပြန်အလှန်ရိုသေမှုနဲ့​… သိပ်ကိုလူ့ယဉ်ကျေးပီသခဲ့ကျတာ… ခုတော့အမြင်ပြောပါတယ် ..နည်းနည်းလျော့လာသလိုပဲ…